Eva/POE Solar Film Extrusion Line - China Eva/POE Solar Film Extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
Sistemụ nri gravimetric na-akpaghị aka na-ahụ na nri siri ike, ihe mgbakwunye mmiri na akụrụngwa nwere nri zuru oke. Usoro mwepụ nke ikuku dị ala iji hụ na ngwakọta zuru oke na ntinye plasticizing iji gbochie ihe mgbakwunye njikọ njikọ. Nrụpụta pụrụ iche nke akụkụ nkedo na -enye ihe ngwọta zuru oke maka ịrapara n'ihe nrịgo. Sistemụ njikwa mgbali na-ahụ na mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe na-ebufe ihe na-adịghị mma n'oge usoro jụrụ oyi, na-adọta na winding.
Ihe di mma
Ngwaahịa obosara (mm)
Ejiri akara ọsọ (m / min)
PLA mpempe akwụkwọ extrusion Line
Mpempe akwụkwọ Die Series-JW-P-A2